तपाईंहरु (पाँच दलीय गठबन्धन)काे पनि सेटिङका दुःखदायी कथाहरु छन्
म गोबिन्द छन्त्याल । म दुई दशक भन्दा लामो समयदेखि आदिवासी जजनाति आन्दोलनमा सामेल हुँदै जनजातिको मुद्दामा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ‘एड्भोकेसी’ गरिरहेको छु । विद्यार्थी राजनीतिदेखि नै राजनीतिमा सहभागी हुँदै आएको हुँ । तर अहिले नागरिक आन्दोलनमा बेस्सरी लागेको छु । मेरो धेरै कुरा छैन । मेरो कुरा म ‘सेटिङ’बाट सुरु गर्छु– डा. गोविन्द केसीलाई पटकौंपटक भोकभोकै अनसन र सडकमा पु¥याउनेमा तपाईंहरू (पाँच दलको गठबन्धन)को पनि सेटिङ हो, यो स्वास्थ्यको सवाल हो; विश्वविद्यालयमा तपाईंहरूको दलको कोटाबाट तपाईंकै कार्यकर्ताहरूलाई भर्ती गरेर विश्वविद्यालयलाई थिलथिल बनाउनेमा सेटिङ चलिरहेको छ त्यो तपाईंहरू हो, यो शिक्षाको सवाल हो ।
मेरो सिधा ठाडो प्रश्न हुन्छ– किनभने सुरुमा नारायण वाग्लेले राखेको टोनमा म थप्दै जान्छु । त्यसै गरेर पहिलो संविधानसभालाई ‘डिसमिस’ बनाउनेमा तपाईंहरूको सेटिङ हो । त्यति मात्र होइन भूकम्पको आवरणमा १६ बुँदे सहमति गरेर प्रतिगामी, विभेदकारी र पहिचानमा आधारित प्रदेशहरू, थोरै संख्यामा रहेका चेपाङ, राउटे, कुसुन्डा, सुरेल, हायुलगायतको स्वायत्त क्षेत्रको चाहनालाई मारेर संविधान जारी गर्ने त्यो सेटिङ तपाईंहरूको हो । म त्यो संविधान बचाउन आन्दोलनमा छैन । आधारभूत राजनीतिक र नागरिक अधिकारहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीले खोस्न थालेपछि म ‘फन्डामेन्टल सिभिक एण्ड पोलिटिकल राइट्स’को ‘स्पेस’का लागि आन्दोलनमा छु । त्यो संविधान मेरो लागि थिएन । त्यो संविधान एउटै जाति, एउटै भाषा, एउटै संस्कृतिको खस-आर्य बर्चस्व स्थापित गर्नका निमित्त ६ वटा प्रदेशहरूको जनसंख्याको वितरण अथवा सीमाङ्कन हिजोको पाँच विकास क्षेत्रलाई ‘डेन्टिङ–मेन्टिङ’ गरिएको संरचनाको पक्षमा म थिएन र अहिले पनि छैन । दुर्भाग्य ! यो संविधान प्रतिगामी हो भन्दाभन्दै पनि संविधानको आधारभूत कुराहरूलाई रक्षा गर्नुपर्ने र नागरिकको आधारभूत ‘सिभिक एण्ड पोलिटिकल राइट्स’को ‘स्पेस’ खुम्चियो भनेर म सडकमा छु । मेरो कुरा भनेको तपाईंहरूले निरन्तर सेटिङ गर्दै आउनुभएको छ ।
अर्को कुरामा म लैजान्छु– नागरिक आन्दोलनको आफू भन्दा अग्रज डा. महेश मास्के सरले भनेपछि अलिक टोन डाउन गर्न मन लाग्यो, होइन भने हुन नसकेका ओलीहरू नै हुनुहुन्छ– तपाईंहरू । तपाईंहरू मान्नुस् या नमान्नुस् ओली हुनका लागि प्रयत्न गरिरहनुभएको छ, त्यसको म एउटा ज्वलन्त उदाहरण दिन्छु । तपाईंहरू समाजवादी, तपाईंहरू साम्यवादी तर हिन्दू धर्म, संस्कृति, मूल्यमान्यतामा आधारित सोँच, चिन्तन, बिम्ब, व्यवहारबाट ग्रसित भइरहनुभयो । धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्तअनुरूपको व्यवहार धर्मनिरपेक्षताको कार्यान्वयनमा देखाउनुभयो ? त्यसमा तपाईंहरूको सेटिङ भएन ? थारूलाई गोली हान्दाखेरि तपाईंहरूको सेटिङ भएन ? थारूलाई त हानियो नि त गोली । यसमा तपाईंहरूको सेटिङ छ, तपाईंहरू यहीँ हुनेहरूको सेटिङ छ । त्यो सँगसँगै म अर्को कुरा भन्छु– समानुपातिक समोवेशिताको कुरा लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि ९१६१ पदका लागि विज्ञापन निकाल्दा तपाईंहरूले संसदमा कुरा उठाउनुभयो ? तपाईंहरूको सेटिङ थियो । ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरेपछि हामीले संसद ब्युँत्यायौँ । तर, प्रा. कृष्ण खनाल सरले बारम्बर भन्नुभएझैँ तपाईंहरूले विकल्प दिनुभयो ? फेरि संसद ब्युँत्याएर तपाईंहरूसँग अप्सन छ, संसद ब्युँत्याएको होइन, अप्सन दिनुभयो ? राजनीतिमा आशाको सञ्चय गरिदिनुभयो, भरिदिनुभयो ? म सदिऔँदेखि विभेद र उत्पीडनमा परिरहेकोले यो मेरो आक्रोशको अभिव्यक्ति हो, पीडाको अभिव्यक्ति हो, ‘ग्रिभान्सेस’को अभिव्यक्ति हो । हामीले तपाईंहरूलाई कहाँ साथ दिएनौ, हरेक परिवर्तनका आन्दोलनहरूमा कहाँ लागेनौ, चेपाङहरु लागेनन् ? अहिलेको कोभिड–१९ ले उत्पन्न परिस्थितिको भोकमारी र रोगको महामारीमा चेपाङ सम्झिनुहुन्छ, राउटे सम्झिनुहुन्छ, राजी सम्झिनुहुन्छ, सुरेल सम्झिनुहुन्छ, हायू आदि–आदि सम्झिनुहुन्छ जसको जीवन मर्ने र बाँच्नेको दोसाँधमा उभिएको छ । अनि हामी कुनचाहिँ सर्वहारा वर्गको गफ गर्छौं । हामी कुनचाहिँ समाजवादउन्मूख बाटो लिइरहेका छौं । त्यसैले यसमा नागरिक आन्दोलनको एक अभियन्ता हुनुको नाताले भन्छु– तपाईंहरूको सेटिङको दुःखदायी कथाहरू छन् । सम्पदा, संस्कृति, भूमि, कलाकौशलले सजिएको काठमाडौं उपत्यकाको वैभवशाली सुन्दर शहरलाई ‘कङ्क्रिट’ कुरूप बनाउन तपाईंहरूको सेटिङ थिएन, छैन– विकासको नाममा ।
तसर्थ, यो खालको कुराहरूको पृष्ठभूमिमा बिनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, डा. मास्केले भन्नुभएजस्तै मेरो आग्रह छ । तपाईहरू (देउवा, प्रचण्ड, नेपाल) ले नै क्रमशः भनिरहनुभएको छ– अदालतले हाम्रो पक्षमा फैसला गर्छ, गठबन्धन पदका लागि होइन मुद्दाका लागि हो, अब ओली सच्चिदैनन्, बालुवा पेलेर तेल निस्किदैन आदि–आदि । तपाईंहरूले भनिरहनुभएको– संविधानको रक्षा गर्दै समयानुकूल परिमार्जन गर्ने उद्देश्यको जगमा पाँच दलीय गठबन्धन हो भन्ने आधार के हाे ? जो अघि हामीले उठाइरहेको र खोजिरहेको आधार यहीँ हो । तपाईंहरूले गरिरहेको सेटिङ जुन हिजोदेखि अहिलेसम्म परिवर्तनको आकांक्षालाई ‘डिसमिस’ गर्दै हिड्नुभयो । तपाईंहरूले लोकतन्त्र होइन दलतन्त्र, समूहतन्त्र, निश्चित जातितन्त्र, निश्चित गुटतन्त्रलाई प्रश्रय दिनुभयो । दलतन्त्र, समूहतन्त्र, निश्चित जातितन्त्र, निश्चित गुटतन्त्रलाई परास्त गर्ने आधार दिनुभएन भने आशाको सञ्चय सञ्चय हुनेवाला छैन । हामी नागरिक आन्दोलन तपाईंहरू कसैलाई पदमा पु¥याउनका लागि आन्दोलन भएको होइन र म नागरिक आन्दोलनमा त्यसरी उभिएको पनि होइन । नेपाली समाजमा विद्यमान विशिष्ट मुद्दाहरू जो सम्बोधन हुन छुटेका वा छुटाइएकाले म आन्दोलनमा उभिएको छु ।
(गोबिन्द छन्त्याल नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका उपाध्क्ष हुन् र हाल उनी नागरिक आन्दोलनमा क्रियाशील छन् । २०७८ असार १६ गते पाँच दलीय गठबन्धन र नागरिक आन्दोलनसँग संसद–भवन बानेश्वरमा भएको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा छन्त्यालले यो भनाइ राखेका हुन् ।)